Resadresaka Tamin’i Anne, Iray Amin’ireo Mpandray Anjara Amin’ny Vaovao An-dahatsary “Manao ahoana any Bamako?” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Jona 2013 8:16 GMT
Amperin'ady any Mali i Frantsa. Nanapa-kevitra ny handefa ao amin'ny YouTube vaovao an-dahatsary iray mikasika ireo resadresany tamin'ny Skype i Anne Morin any Parisy sy ilay vehivavy namany Awa Traoré any Bamako. Teny ampiandohana, ny nofinofy dia ny handefa iray isan'andro mikasika izany ; tsy voatàna anefa io firindràna io raha tsy afaka andro vitsivitsy. Nanaraka ny gadona indray mandeha isan-kerinandro ry zareo ary nisy fahanginana lavabe taorian'ny famoahana fahasivy.
Vao avy napetraka ao anaty aterineto ny lahatsary fahafolo amin'ity andiany ity.
Nanararaotra an'izay aho mba hametrahana fanontaniana vitsvitsy tamin'i Anne.
Anna Gueye (Global Voices): Nahoana no io andiany io?
Anne Morin: Tsy afaka ny hijanona hiandry vaovao avy amin'ny filazam-baovao fotsiny eo aho ary naniry ny hifandray tsy tapaka amin'ireo namana any Mali sy Awa indrindra indrindra izay namana vaovao nefa ifampizaràko zavatra betsaka noho izy koa mpanatontosa tahirin-kevitra/fanadihadiana.
Resadresaka nataonay sy Awa io ; izay mampiahiahy ahy dia ny mikasika ny fikasanay momba ny fananganan-jaza maliana.
Nahoana no i Mali?
Nanao asa fanasoavana efa ho 10 taona tany amin'ny firenena Dogon ireo rafozako (70 sy 75 taona). Namorona fikambanana iray antsoina hoe Jean d’Argile ry zareo, izay fikambanana niaraka nanorina ny laboratoara biolojika iray ao amin'ny toeram-pitsaboana ao Sangha tamin'ny via Sahel. Efa an-taona maro araka izany ny fandehanako any Mali.
Eo amin'ireo lahatsary eo ambony ireo dia milaza ianao fa niato ireo fananganan-jaza iraisam-pirenena any Mali. Inona no anton'izay?
Izany rehetra izany dia nanomboka tamin'ny fanambaràna ofisialy ny lalàna vaovao mikasika ny fianakaviana, ny janoary 2012, izay misy ny artikla 540 mametra ny fananganan-jaza ho an'ireo teratany maliana irery ihany. Nandritra ny volana maromaro, na teo aza izany rehetra izany, nitohy tahaka ny teo aloha ihany ny fananganan-jaza. Saingy ny volana Novambra, Nanapa-kevitra ny hanajanona ny fananganan-jaza iraisam-pirenena Ramatoa Alwata Ichata Sahi, Minisitry ny Fiahiana ny Ankizy, ny Vehivavy sy ny Fianakaviana. Ho famaliana ny taratasin'ny Sekreteran'ny Fifanarahana tany La Haye izany, fifanarahana an-tsoratra iraisam-pirenena mikasika ny fananganan-jaza sady anisany mpanao sonia i Mali. Fangatahana ireo tompon'andraikitra maliana mba hanaraka izay voalaza ao anaty fitsipika iraisam-pirenena [izay nosoniavin'izy ireo] io taratasy io ary nandroso safidy roa: (i) na hajanona ny fananganan-jaza iraisam-pirenena amin'ireo vahiny satria mandràra izany ny lalàna vaovao ao amin'ny firenena ; (ii) na ovàna ny lalàna. Nisafidy ilay vahaolana voalohany ny tompon'andraikitra maliana, ary tsy nisy filazàna fanomanana mihintsy.
Mpanao fangatahana fananganana firy no voakasik'izany?
Tamin'izany fotoana, eo ho eo amin'ny antontan-taratasina vahiny mpangataka hanangana, miisa 150 (Frantsay no betsaka, Italiana, Espanola, Kanadiana…) no nofantenana araka ny tokony ho izy mifanaraka amin'ireo fepetra ara-moraly sy ara-pitaovana. Nankatoavina araka izany ny fahamatorana sy fahitsian'izy ireo. Tamim-pahatokisana, matetika nandritra ny taona maro, ireo mpanao fangatahana voafantina dia niandry an'i Mali hanankina amin'izy ireo zaza nilaozan'ny ray aman-dreniny. Nisy araka izany ny fifanarahana teo amin'izy ireo sy Mali.
Nisy politika vonjimaika noeritreretina ve tao?
Mampalahelo fa tsia. Mazava tsara anefa ny Fifanarahana natao tany La Haye: “Ny fampitarazohana ny fametrahana maharitra ny zaza ho eo anivon'ny fianakaviana, indrindra mikasika ireo tranganà tetezamita dia mety hifanohitra tanteraka amin'ny tombontsoa ambonin'ilay ankizy”. Nefa, tsy mbola misy politika vonjimaika voapetraka. Tsy nampitarazohana ireo famindràna fa najanona tampoka izy ireny. Ary dia nitranga tsy nampoizina ny efa azo niomanana mialoha : tsinontsinona ny fananganan-jaza ataon'ireo teratany maliana, miaritra ny habetsahana tafahoatra ireo akany fitaizana zaza. Fahiny, ireo ONG natsangan'ny ray aman-dreny mpanangana sy ireo mpanao fangatahana hanangana no tena nahazoany famantsiam-bola tamin'ny lafiny maro, natrehan'izy ireo, niaraka tamin'ny fanajanonana ny fananganan-jaza iraisam-pirenena, ny fihenan'ny toe-bolany. Izay midika ho, eo amin'ny fanatenterahana, fa tsy manana n'inona n'inona izy ireo: rano, ronono, sakafo, izay ilaina mba hivelomana, mba tsy hilazana ireo lafika fanolo na tavoahangy fampinonoana zaza; midika izany fa tsy afaka manakarama ireo mpiasany intsony ry zareo, tsy mahazo fitsaboana ireo ankizy (*).
Ankoatra izay, mampiahiahy ny ho fitomboan'ny famonoan-jaza, efa voarara rahateo ny fanariana zaza any Mali sady hipoka ireo akany fitaizana zaza.
Tsy avy aminay io fanamarinana io. Nifanarahan'ireo rehetra mpiara-miombon'antoka amin'ny resaka fananganan-jaza any Mali izay hivory ny 16 hatramin'ny 18 may tany Bamako izy io, fandraisana andraikitra nataon'ny Minisitry ny Fiahiana ny Vehivavy sy ny Ankizy, mandritra ny Sehatra fakàn-kevitra momba ny fananganan-jaza. Nifanaraka ny rehetra amin'ny filàna vahaolana tena izy sy maika mikasika ny maha-olombelona.
Ahoana no fivoatran'ny toe-draharaha?
Ny sisi-kevitra tokana izay napetraky ny minisitera dia ny fanovàna ny lalàna ary io dia aorian'ireo fifidianana ho avy, izay voalahatra hatao ny volana jolay. Ny tsara indrindra, dia tsy mbola ho ao anatin'ny volana maro no hiverenan'ny fanomezana fianakaviana mpiahy sy ireo fananganan-jaza.
Efa eo ampiandrasana ireo zaza ary tsy manana n'inona n'inona nandritra ny 8 volana. Eo amin'ny fiainan'ny zaza menavava, toy ny mandrakizay ny 8 volana. Ny fanarahana vanin'andro ho an'ny fizotry ny lalàna, mba ho ara-drariny araka ny tokony ho izy, dia tsy azo ampifanoherina amin'ny fotoam-pahaveloman'ny zaza menavava.
Nefa dia azo raisina eo akaiky eo ny vahaolana maika momba ny maha-olombelona: fampivondronana ho fianakaviana ireo mpisoratra efa voafantina, izy ireo izay nanao fanekena mba ho tia sy hitaiza any an-tokantranony zaza iray avy ao Mali amin'ny fanajana ny kolontsaina niaviany.
Angamba vakiteny iray tsotsotra nandikana ny lalàna izany, saingy efa natao izy io ny fanombohan'ny volana may 2013: fitsarana mikasika fananganan-jaza 8 nozanahina talohan'ny oktobra 2012 (sy ny fampiharana ny lalàna vaovao mifehy ny fianakaviana) eo amin'ireo fianakaviana eoropeana, no nisy tamin'ny farany. Ho amin'ny tombontsoa ambonin'ny ankizy, ary satria misy ny hamehana, ary tsy famonjena olona tra-doza, io fandikana io no tsara.
(*) Mandefa fanampiana tsy tapaka any amin'ireo akany fitaizana ary amin'izao fotoana izao, mikarakara ronono 4m3, ireo lafika fanolo sy akanjo izay tsy maintsy alefa amin'ny herinandro ambony. Misy zaza 100 azo zanahana any Bamako.